Waa maxay Nidaamka Dhiirrigeliyaha Net (NPS) Nidaamka? | Martech Zone
Toddobaadkii hore, waxaan u safray Florida (waxaan sameeyaa tan rubuc kasta ama wixii la mid ah) iyo markii ugu horreysay ee aan dhageysto buug ku saabsan Audible oo ku saabsan jidka loo maro. Waan xushay Su'aasha Ugu Dambeysa ee 2.0: Sidee Shirkadaha Dhiirrigeliyeyaasha Net-ka ugu barwaaqoobaan Adduun Macaamiil Wada ka dib wadahadal lala yeesho qaar ka mid ah xirfadlayaasha suuqgeynta ee khadka tooska ah.
The Nidaamka Dhibcaha Dhiirrigelinta Net waxay ku saleysan tahay su'aal fudud… the su'aasha ugu dambeysa:
Miisaanka 0 ilaa 10, intee in le'eg ayaad u gudbin kartaa saaxiib?
Buuggu wuxuu u socdaa sharraxaad sida habka isha furan loo qaatay dhammaan warshadaha, inta badan wax laga beddelo wixii ka sarreeya 0 illaa 10, su'aasha mararka qaarkood way kala duwan tahay, su'aalaha la socoshada ah ayaa la hagaajiyaa oo waqtigooda lagu bixiyaa si loo helo dhibco tirakoob ahaan sax ah oo matala caafimaadka shirkaddaada. Maskaxda ku hay in aysan ahayn dhibco gaar ah oo loo baahan yahay in lagu saadaaliyo sida ay u shaqeyneyso shirkaddaada, waa in lagu falanqeeyaa dhammaan dhibcaha tartamayaasha ee warshadahaaga. Uma baahnid inaad haysato 9 marka qaybahaaga kale ee warshadaha ay riixayaan 3s! Warshadaha qaarkood waxay si fudud u soo jiitaan macaamiil cabsi leh.
NPS waxay noqoneysaa qaab caadi ah oo lagu cabbiro daacadnimada macaamiisha iyo saameynta suuqgeynta, iibka, adeegga macaamiisha iyo xitaa caafimaadka maaliyadeed ee shirkad. Si ka duwan noocyada waxqabadka muhiimka ah ee muddada-gaaban ee shirkadda, NPS waxay eegaysaa sida ay macquul u tahay in macaamiishaadu ay kula joogaan oo xitaa kugula taliyaan. Maaddaama haysashada macaamiisha ay muhiim u tahay faa'iidada iyo hadalka afka waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu kasbado macaamiisha, NPS waxay isu caddaynaysaa inay tahay nidaam aad u wanaagsan oo lagu saadaaliyo caafimaadka muddada-dheer ee shirkadda. Marka dhammaan waaxyaha iyo istiraatiijiyaddu ay isku toosan yihiin si loo wanaajiyo daacadnimada macaamiishaada, halista uma lihid inaad ku dhex tartantid silo ku dhex jira hay'adda kuwaas oo laga yaabo inay soo saaraan tiro aad u tiro badan - laakiin ha siin khibrad macmiil oo weyn.
Xididkeeda, NPS = Boqolleyda Dhiirrigeliyeyaasha - Boqolleyda Xadgudbayaasha. Marka, haddii 10% macaamiishaadu ay kor u qaadaan shirkaddaada oo 8% ay waxyeello u geystaan ​​sumaddaada adoo adeegsanaya erey-afka-xun, waxaad leedahay NPS 2.
Nidaamka Dhibcaha Dhiirrigelinta Net wuxuu u kala jabiyaa macaamiishaada dhiirrigeliyeyaal, ceebeeyayaal iyo dad-diidmo Shirkad kastaa waa inay dooneysaa inay yareyso kuwa wax u dhimaya maxaa yeelay waxay qaadataa ilaa 5 dhiirrigeliyeyaal si ay ula dagaallamaan dhagarqabe kasta… taas oo ah wax xoogaa shaqo ah! Ganacsi walbana aad ayuu uga fiicnaan lahaa haddii uu ka fogaado gabi ahaanba nacfiga iyo sharaf dhaca oo uu soo jiito macaamiisha saxda ah - dhiirrigeliyeyaasha. Marka laga soo tago daacadnimada macaamiisha, NPS waxay sidoo kale u maraysaa falanqaynta qanacsanaanta shaqaalaha. Sida aad u rajeyn laheyd inaad hesho macaamiil kor u qaada ganacsigaaga, waxaad sidoo kale dooneysaa shaqaale dhiirrigeliya sidoo kale!
Dadkuna Danjiraha ayaa isku soo duubay xog-uruurintan oo ku saabsan Dhiirrigeliyaha Shabakadda Nete taas ayaa soo koobaysa:
PS: In kasta oo buuggu ahaa mid fantastik ah, IMO waxaan u maleynayaa in mawduuca laga dhimi lahaa in ka badan 7 saacadood oo kaliya labo ah, in kastoo. Taasi waa iskuxirahayga xiriiriyaha ah haddii aad rabto inaad iibsato buugga.
Tags: geyntaxisaabimacaamiisha kaxeeyey adduunkadaacadnimada macaamiishaxayiraadahasida loo xisaabiyo dhibcaha dhiirrigeliyeyaasha saafiga ahsida loo xisaabiyo npsDhiirrigeliye NetShirkadaha Shirkadaha Dhiirrigeliyanatiijada dhiirrigelinta netnpsisle'eg npscaanaha 'nps formula'marinnadadallaaliyeyaashascoreSu’aasha ugu dambeysa 2.0